८ सय १३ नेपाली कुवेतबाट किन फर्काइए ? - inaruwaonline.com
८ सय १३ नेपाली कुवेतबाट किन फर्काइए ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत्र ०८, २०७२ समय: १४:२२:४४
८ चैत्र, काठमाडौं । कुवेतले अवैधानिक कामदारहरुलाई सन् २०१६ यता ६ हजार विदेशी कामदारलाई देशनिकाला गरेको छ ।अवैधरुपमा कुवेत पुगेका, भागेर रोजगारदाता परिवर्तन गरेका र भिसा अवधि सकिएर पनि उतै बसिरहेका ८१३ नेपालीलाई कुवेतले निश्काशन गरेको कुवेतस्थित नेपाली दुताबासले जनाएको छ ।
यसरी नेपाल फर्काइएकामा भने आपराधिक मुद्दा खेपिरहेका नेपालीहरु परेका छैनन् । दूतावासका अनुसार ३४ जना नेपालीहरु कुवेतको जेलमा छन् । उनीहरु तोकिएको सजायँ भुक्तान गरेर मात्रै स्वदेश फर्किन पाउनेछन् ।कुवेतमा वैधानिक बन्न धेरै रकम खर्च गर्नुपर्ने भएपछि अहिले प्रहरीमार्फत पक्रिएर स्वदेश फर्किने बढेका हुन् । गैरकानुनी विदेशी कामदारले कुबेत सरकारलाई २ लाख रुपैयाँसम्म बुझाएपछि कानुनी रुपमा पुनदर्ता गर्न सकिन्छ ।
जनवरी महिनामा ३१८, फेबु्रअरीमा ३५६, मार्च महिनायता १३९ जना नेपाली कामदारलाइ नेपाल फर्काइएको नेपाली दुताबासले जनाएको छ । कुवेतमा अझै ४ हजार भन्दा बढी नेपाली अवैधानिक रहेको अनुमान छ ।पक्राउ परेका अवैध कमादार स्वदेश फर्किएपछि पुनः कुवेतमा कामका लागि जान पाउँदैनन् । तर सरकारसँग आत्मसर्पण गर्नेहरुलाई भने फेरि कुवेत जान कुनै पनि समस्या हुनेछैन ।
काठमाडौं । साउदी अरबका विभिन्न क्याम्पमा रहेका सयौं नेपाली श्रमिक घर फर्कन नपाएको भन्दै नेपाल सरकारविरुद्ध उत्रिएका छन् ...
काठमाडौँ – कतार सरकारले आप्रवासी श्रमिकको तलब वृद्धि र रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । कतारले कानुन नं...
कतारले श्रमिकको न्यूनतम तलब एक हजार रियाल तोक्यो
काठमाडौं। नेपालीको प्रमुख गन्तव्य कतारले अदक्ष श्रमिकको न्यूनतम तलब एक हजार रियाल (३० हजार रुपैयाँ) तोकेको छ । कतारले रो...
विदेशबाट ८० प्रतिशत कामदार फर्किने
काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिब ८० प्रतिशत कामदार स्वदेश फर्कन चाहेको अध्ययनले देखाएको छ ।माइग्रेन ल्याबको सहकार्...